ပရိသတ် ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လိုက်တွေပြန်လာကြပြီ . . . | FOX Sports Myanmar
မြန်မာအသင်းသတင်း | အောကျတိုဘာ 21, 2019
ပရိသတ် ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လိုက်တွေပြန်လာကြပြီ . . .
မြန်မာဘောလုံးအသင်းကို အန်တိုနီဟေး နဲ့ ဦးကြည်လွင် ပြန်လာမယ်တဲ့…
ဟုတ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လိုက်တွေ ပြန်လာပါတော့မယ် …
ဒါဆို။ မစ္စတာဟေးနဲ့ ဆရာကြည်..၊အတွဲညီညီ ကြည့်ကောင်းပြီပေါ့..
ဒါဟာ မင်္ဂလာရှိတဲ့ သတင်း ပါ။
မနေ့တုန်းက MFF ကနေပြီး ဆရာ နှစ်ယောက်ကို မြန်မာဘောလုံးအသင်းအတွက် တာဝန် ပေးခန့်အပ်ဖို့ရှိကြောင်းကို တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။
မစ္စတာအန်တိုနီဟေးရော ဦးကြည်လွင်ရော နှစ်ယောက်စလုံး မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံး အသင်းကို တာဝန်ကိုယ်စီနဲ့ ဦးဆောင်ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုတော့ ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့လည်း ကျေနပ်ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ပါလား။ မစ္စတာ အန်တိုနီဟေးက နည်းပြချုပ်တာဝန် ပြန်ယူပြီး ဦးကြည်လွင်က လက်ထောက်နည်းပြ အဖြစ် အခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရ တဲ့ မြန်မာ အသင်းကို ဆွဲတင်ဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
အရင်ဆုံးပြောချင်တာက မြန်မာအသင်းအပေါ်မှာ စိတ်ရော၊ကိုယ်ပါနှစ်ပြီး စေတနာထား အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူပေးချင်တဲ့ လူတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ ဆရာနှစ်ယောက်ဟာ မှန်တာလုပ် ၊ ဟုတ်တာပြော၊ စည်းကမ်းကောင်းပြီး မျက်နှာလိုက်မှု မရှိသလို အသင်းအတွက် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်ကြတာကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ အမှားတွေပေါ်မှာ အမှန်တရားတွေ ပြန်သက်ရောက်စေမယ့် အဖြစ်ရှိလာတော့မလားပဲ။
လက်ရှိ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ဆရာနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရင်းတပည့်တွေချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မစ္စတာဟေးထက်၊ ဦးကြည်လွင်ပါ။ ဆရာကြည့်လက်ရင်းတပည့်တွေ ဆိုရင် မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာနဲ့မကင်းတဲ့ လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေ ရှားပါတယ်။ သက်တမ်း အလိုက်မှာကိုတည်းက ဆရာ လက်အောက်မှာ နာယူမှတ်သား သွန်သင်မှုအောက်မှာ ကစား ခဲ့ကြသူတွေ အားလုံးနီးပါးလက်ရွေးစင်ထဲမှာပါတယ်။ ဆရာကြည်နဲ့လက်တွဲဖူးသူတွေချည်းပါ ပဲ။ ဒီတော့ တပည့်တွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့ ဆရာကြည်အတွက်တော့ ဘယ် သူက ဘယ်လို၊ ဘယ်သူက ဘယ်ပုံဆိုတာ အထာလေးတွေ ကောင်းကောင်းနပ်နေပါပြီ။
စည်းကမ်းပိုင်းကြည့်မလား၊ သိပ်တိကျတယ်။ ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တတ်တဲ့ ဆရာကြည်နဲ့ တပည့်ဟောင်းတွေ ပြန်ဆုံပြီ။
ပြီးတော့ အလုပ်ပေါ်တာဝန်အပြည့်ယူလိုစိတ်ရှိတဲ့ ဆရာကြည် လိုမျိုး မစ္စတာ အန်တိုနီဟေးကလည်း စည်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ဂျာမနီသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေ တာကြောင့် ကစားသမားတွေအတွက်တော့ လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ မစားသာဘူးဆရာ၊ ပွဲ ထွက်နေရာအတွက် လူတိုင်း တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်ကိန်းပဲ။ လေ့ကျင့်ရေးပြင်းထန်မယ်၊ ပြိုင်ပွဲမှာ သူများထက်သာအောင် ပိုရုန်းရမယ်၊ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာတွေဟာ အရင်တစ်ချိန်တုန်းက လိုမျိုး ပွဲမ၀င်ခင်အပြင်က ကျင်းပတဲ့ ကစားသမားအချင်းချင်း ကြားက နေရာလုတိုက်ပွဲဟာ မြန်မာအသင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အခြေခံပြန်ဖြစ်လာစေမလားပဲ။ ဖြစ်မယ်လို့လည်း မျှော် လင့်မိတယ်။
နောက်တစ်ချက်က မစ္စတာ အန်တိုနီဟေးဘေးမှာ ဦးကြည်လွင်ရှိနေတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ အချင်းချင်းတိုင်ပင် နိုင်မယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပေးအယူမျှမျှတတနဲ့ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာနဲ့ လက်တွဲသွားနိုင်ခဲ့ရင် မြန်မာအသင်းဟာ လိုအပ်တာထက် ပိုတိုးတက်လာဖို့ပဲ မျှော်မိတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဆရာ ဦးကြည်လွင်ဟာ ဒီဘက်ခေတ် မြန်မာနည်းပြ တွေထဲမှာ အတွေ့အကြုံအရှိဆုံး အောင်မြင်မှု ကောင်းတွေ ရယူထားနိုင်တဲ့ နည်းပြတစ် ယောက်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာကစားသမားတွေ အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတာဟာ မစ္စတာ အန်တိုနီဟေးအတွက် ပိုကောင်းတယ်။
လူရွေးတဲ့အခါမှာ မြန်မာကစားသမားတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အားနည်းချက်တွေရှိလာ နိုင်တဲ့အပေါ်မှာ မစ္စတာဟေးကို ဆရာကြည် က အကျိုးအကြောင်းနဲ့တကွ ပြောဆိုကာ ထောက်ပြနိုင် တယ်။ လူနေရာချထားတဲ့ ကိစ္စတွေအပေါ်မှာလည်း မှန်ကန်မှုရှိစေဖို့အတွက် ဆရာကြည် အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်မယ့်အပြင် တိုက်ပွဲအတွက် မှန်ကန်တည့်မတ်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို မစ္စတာဟေးနဲ့အတူ အကောင်းဆုံး ဖော်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ ရှေ့မှာလည်း မစ္စတာဂတ်ဇီ အပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသားနည်းပြ တွေနဲ့လည်း လက်တွဲခဲ့သူပီပီ ဆရာကြည် အဖို့ မစ္စတာဟေးနဲ့ မြန်မာအသင်းကို အကောင်း ဆုံး ပြန်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ရှိနေမှာသေချာပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ..အခုအချိန်မှာ မြန်မာဘောလုံးအသင်းဟာ ဆရာကောင်း၊ သမားကောင်း တွေတော့ ရနေပါပြီ။ ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ဆရာကောင်း တပည့်တွေ ပန်းကောင်းပန်နိုင် ဖို့လိုသလို ဆရာတွေထက် တပည့်တွေက လက်စောင်း ထက်ဖို့ပဲလိုတော့ပါကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ …
ူမန်မာဘောလုံးအသင်းကို အန်တိုနီဟေး နဲႚ ဦုးကည်လငြ်ူပန်လာမယ်တဲ့…
ဟုတ်ပၝတယ်။ ပရိသတ်ဋ္ဌကိက်ြတဲ့ ဇာတ်လိုက်တြေူပန်လာပၝတော့မယ် …
ဒၝဆို။ မင်္စတာဟေးနဲႚ ဆရာုကည်..၊အတြဲညီညီုကည့်ကောင်း္ဘပီပေၝ့..
ဒၝဟာ မဂဿလာရြိတဲ့ သတင်း ပၝ။
မနေႚတုန်းက MFF ကန္ဘေပီး ဆရိာံစ်ြယောက်ကိုမန်မာဘောလုံးအသင်းအတကြ် တာဝန် ပေးခန်ႚအပ်ဖိုႚရြိေုကာင်းကို တရားဝင် သတင်းထုတ်ူပန်ခဲ့တယ်။
မင်္စတာအန်တိုနီဟေးရော ဦုးကည်လင်ြရေိာံစ်ြယောက်စလုံူးမန်မာ့လက်ရြေးစင်ဘောလုံး အသင်းကို တာဝန်ကိုယ်စီနဲႚ ဦးဆောင်ကိုင်တယ်ြမယ်ဆိုတော့ ပရိသတ်တြေ အနေနဲႚလည်း ကေဵနပ်ဝမ်းသာစရာူဖစ်ရတယ်မဟုတ်ပၝလား။ မင်္စတာ အန်တိုနီဟေးက နည်ူးပခဵပ်ြတာဝန်ူပန်ယ္ဘူပီး ဦုးကည်လင်ြက လက်ထောက်နည်ူးပ အူဖစ် အေူခအနေဆိုးတေနြဲႚ ရုန်းကန်နေရ တဲူ့မန်မာ အသင်းကို ဆဲတြင်ဖိုႚူဖစ်လာပၝတယ်။
အရင်ဆုံးေူပာခဵင်တာကူမန်မာအသင်းအပေၞမြာ စိတ်ရော၊ကိုယ်ပၝိံစ်္ဘြပီး စေတနာထား အောင်ူမင်မတြေကြို ရယူပေးခဵင်တဲ့ လူတေထြဲမြာပၝဝင်နေတဲ့ ဆရိာံစ်ြယောက်ဟာ မန်ြတာလုပ် ၊ ဟုတ်တာေူပာ၊ စည်းကမ်းကောင်း္ဘပီး မဵက်ြိာံလိုက်မြ မရြိသလို အသင်းအတကြ် ဦးဆောင်ဦးရကြ်ူပြိုိံင်ုကတာေုကာင့် ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် ဒၝဟာ အမြားတေပြေၞမြာ အမန်ြတရားတြေူပန်သက်ရောက်စေမယ့် အူဖစ်ရြိလာတော့မလားပဲ။
လက်ရြိ လက်ရြေးစင်အသင်းမြာ ဆရိာံစ်ြယောက်ရဲႚ လက်ရင်းတပည့်တေခြဵည်းပၝပဲ။ အထူးသူဖင့် မင်္စတာဟေးထက်၊ ဦုးကည်လင်ြပၝ။ ဆရာုကည့်လက်ရင်းတပည့်တြေ ဆိုရင် မန်ြပၝလိမ့်မယ်။ ဆရာနဲႚမကင်းတဲ့ လက်ရြေးစင်ကစားသမားတြေ ရြားပၝတယ်။ သက်တမ်း အလိုက်မြာကိုတည်းက ဆရာ လက်အောက်မြာ နာယူမတ်ြသား သန်ြသင်မအြောက်မြာ ကစား ခဲု့ကသူတြေ အားလုံးနီးပၝးလက်ရြေးစင်ထဲမြာပၝတယ်။ ဆရာုကည်နဲႚလက်တြဲဖူးသူတေခြဵည်းပၝ ပဲ။ ဒီတော့ တပည့်တြေ အေုကာင်း ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့ ဆရာုကည်အတက်ြတော့ ဘယ် သူက ဘယ်လို၊ ဘယ်သူက ဘယ်ပုံဆိုတာ အထာလေးတြေ ကောင်းကောင်းနပ်နေပၝ္ဘပီ။
စည်းကမ်းပိုင်ုးကည့်မလား၊ သိပ်တိကဵတယ်။ေူပာရင်ေူပာတဲ့အတိုင်းလုပ်တတ်တဲ့ ဆရာုကည်နဲႚ တပည့်ဟောင်းတြေူပန်ဆုံ္ဘပီ။
္ဘပီးတော့ အလုပ်ပေၞတာဝန်အူပည့်ယူလိုစိတ်ရြိတဲ့ ဆရာုကည် လိုမဵြိး မင်္စတာ အန်တိုနီဟေးကလည်း စည်းစနစ်ဋ္ဌကီးမားတဲ့ဂဵာမနီသားတစ်ယောက်ူဖစ်နေ တာေုကာင့် ကစားသမားတေအြတက်ြတော့ လက်ရြေးစင်အသင်းမြာ မစားသာဘူးဆရာ၊ ပြဲ ထက်ြနေရာအတကြ် လူတိုင်း တိုက်ပြဲဝင်ရမယ့်ကိန်းပဲ။ လေ့ကဵင့်ရေူးပင်းထန်မယ်၊္ဘပိင်ြပဲမြာ သူမဵားထက်သာအောင် ပိုရုန်းရမယ်၊ဋ္ဌကြိးစားရမယ်ဆိုတာတေဟြာ အရင်တစ်ခဵိန်တုန်းက လိုမဵြိး ပဲမြဝင်ခင်အူပင်က ကဵင်းပတဲ့ ကစားသမားအခဵင်းခဵင်ုးကားက နေရာလုတိုက်ပဲဟြာူမန်မာအသင်းအောင်ူမင်ဖိုႚအတကြ် အေူခခူံပန်ူဖစ်လာစေမလားပဲ။ူဖစ်မယ်လိုႚလည်း မ္တွော် လင့်မိတယ်။
နောက်တစ်ခဵက်က မင်္စတာ အန်တိုနီဟေးဘေးမြာ ဦုးကည်လင်ြရြိနေတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ အခဵင်းခဵင်းတိုင်ပင်ိုိံင်မယ်။ တစ်ယောက်နဲႚတစ်ယောက်အပေးအယူမ္တွမ္တွတတနဲႚ စည်းလုံး ညီညတ်ြစြာနဲႚ လက်တြဲသြာိးုိံင်ခဲ့ရင်ူမန်မာအသင်းဟာ လိုအပ်တာထက် ပိုတိုးတက်လာဖိုႚပဲ မ္တွော်မိတယ်။ ဘာေုကာင့်လည်းဆိုတော့ ဆရာ ဦုးကည်လင်ြဟာ ဒီဘက်ခေတ်ူမန်မာနည်ူးပ တေထြဲမြာ အတြေႚအဋ္ဌကြံအရြိဆုံး အောင်ူမင်မြ ကောင်းတြေ ရယူထာိးုိံင်တဲ့ နည်ူးပတစ် ယောက်ူဖစ်တယ်။္ဘပီးတောူ့မန်မာကစားသမားတြေ အေုကာင်းကောင်းကောင်းသိတာဟာ မင်္စတာ အန်တိုနီဟေးအတကြ် ပိုကောင်းတယ်။
လူရြေးတဲ့အခၝမြာူမန်မာကစားသမားတေနြဲႚ ပတ်သက်လာရင် အားနည်းခဵက်တေရြိလိာိုံင်တဲ့အပေၞမြာ မင်္စတာဟေးကို ဆရာုကည် က အကဵြိးအေုကာင်းနဲႚတကြေူပာဆိုကာ ထောက်ူပိုိံင် တယ်။ လူနေရာခဵထားတဲ့ ကိင်္စတေအြပေၞမြာလည်း မန်ြကန်မရြိစေဖိုႚအတကြ် ဆရာုကည် အကောင်းဆုံး အဋ္ဌကံဥာဏ်ပေိးုိံင်မယ့်အူပင် တိုက်ပဲအြတကြ် မန်ြကန်တည့်မတ်စေမယ့် နည်းလမ်းတေကြို မင်္စတာဟေးနဲႚအတူ အကောင်းဆုံး ဖော်ဆောင်ိုိံင်မြာပၝ။ ရြေႚမြာလည်း မင်္စတာဂတ်ဇီ အပၝအဝင်ိုိံင်ငူံခားသားနည်ူးပ တေနြဲႚလည်း လက်တဲခြဲ့သူပီပီ ဆရာုကည် အဖိုႚ မင်္စတာဟေးနဲႚူမန်မာအသင်းကို အကောင်း ဆုံူးပန်တည်ဆောက်ိုိံင်ဖိုႚ ရြိနေမြာသေခဵာပၝတယ်။
ဆိုတော့ကာ..အခုအခဵိန်မြာူမန်မာဘောလုံးအသင်းဟာ ဆရာကောင်း၊ သမားကောင်း တေတြော့ ရနေပၝ္ဘပီ။ ကဵန်တဲ့အပိုင်းမြာတော့ ကစားသမားတေအြနေနဲႚ ဆရာကောင်း တပည့်တြေ ပန်းကောင်းပန်ိုိံင် ဖိုႚလိုသလို ဆရာတေထြက် တပည့်တေကြ လက်စောင်း ထက်ဖိုႚပဲလိုတော့ပၝေုကာင်းေူပာရင်းနဲႚ …
Home Football Team Myanmar ပရိသတ် ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်လိုက်တွေပြန်လာကြပြီ . . .